Maxaa sababay qal qalka ka jira Kalfadhiga 5aad ee Golaha Shacabka ? – Kalfadhi
Wixii ka dambeeyay 27kii bishii hore markaas oo la furay Kalfadhiga 5aad ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya waxaa sii kordhayay qal qalka iyo kalsooni la’aanta lagu qabo in ay qabsoomaan fadhiyada Golaha Shacabka.
Muddo 13 maalmood ah Golaha Shacabka ee baarlamaanka waxaa ka baaqday afar (4) fadhi oo laba kamid ah u baaqday Kooram la’aan, halka midna uu u baaqday buuq iyo Sawaxan hareeyay madasha baarlamaanka iyo shalay oo ay aheyd in ay shiraan oo aan dhicin wax kulan ah.
Waxaa isa soo taraya eedeymaha loo jeedinayo Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyadoo ay dad badan qabaan in ay jirto faragelin dhanka Xukuumadda ah halka qaar kalane ay qabaan in Golaha Shacabka ay noqdeen madal fowdo oo aan gudan waajibaadkii loo igmaday.
Xildhibaan Cilmi Cusmaan Ceynsane oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Kalfadhi u sheegay in Xukuumadda Soomaaliya ay curyaamisay fadhiyada Golaha Shacabka mas’uuliyadda wixii ka dhashana uu qaadan doono Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan.
“Xukuumadda waxay afduubatay baarlamaanka mana ogola isla xisaabtan, Xildhibaanadii waxay ka dhigtay kuwa wasiiro ah iyo kuwa la,laaluushay” ayuu yiri Xildhibaan Cilmi Cusmaan Ceynsane oo la hadlay Kalfadhi.
“Wixii ka dhasha oo xumaan iyo samaan ah waxaa qaadan doona Guddoomiye Maxamed Mursal, oo u muuqda mid laga maamulo Xafiiska Raysal Wasaaraha” ayuu yiri Xildhibaan Ceynsane oo katirsan Golaha Shacabka ee BFS.
Wasiir ku xigeenka Warfaafinta Soomaaliya Xildhibaan Aadan Isxaaq Cali oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Xildhibaano kooban oo katirsan baarlamaanka Soomaaliya ay fowdo ka dhax abuureen fadhiyada Golaha Shacabka
Aadan Isxaaq Cali ayaa ka fogeeyay Xukuumadda eedeymaha loo soo jeediyay waxa uuna baaqashada fadhiyada Golaha Shacabka ku eedeeyay Xildhibaano mucaarad ah oo aan ka fekereyn danta Qaranka sida uu hadalka u dhigay.
“Dhibaatada ka jirta Shirarka baarlamaanka waxaa ka dambeeyay koox yar oo mucaarad ah oo dan gaar ah ka fekeraya” ayuu yiri Xildhibaan Aadan Isxaaq Cali oo Warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho.
Isku tuur tuur ayey noqotay cida qaadaneysa mas’uuliyadda qabsoomid la’aanta fadhiyada Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana Xildhibaanada ay noqdayn kuwo kala aaminsan laba aragti, oo kala ah Mucaarad iyo Muxaafad.
Xildhibaan C/llaahi Goodax Barre oo Xubnaha Golaha Wasiirada Soomaaliya katirsan ayaa fadhigii ugu dambeeyay ee Golaha Shacabka markii uu baaqday kadib warbaahinta u sheegay in baarlamaanka Soomaaliya ay ku jiraan Xildhibaano u shaqeeya Al-shabaab sida uu hadalka u dhigay.
“Al-shabaab ayaa la wareegay in xaruntada fadhiyada, Xildhibaanada waa shabaab, dadka Soomaaliyeed waa in ay ogaadaan in wakiilo Al-shabaab ah ay halkaan joogaan” ayuu yiri Xildhibaan C/llaahi Goodax Barre.
Khaliif Cabdi Cumar oo katirsan Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa Kalfadhi u sheegay in dhibaato walba oo ka dhacda fadhiyada Golaha Shacabka ay mas’uuliyad ka saarantahay Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan.
Xildhibaan Khaliif ayaa sheegay in Guddoomiye Maxamed Mursal uusan xor u aheyn maamulidda fadhiyada baarlamaanka sida uu hadalka u dhigay waxa uuna ku taliyay in Xukuumadda ay faraha kala baxdo Shaqada baarlamaanka Soomaaliya.
“Walaalkeey Maxamed Mursal ayaa leh mas’uuliyadda waxa ka dhacaya baarlamaanka, waxaana ii muuqata in uusan u madaxbanaaneen maamulidda baarlamaanka oo meesha la keensaday” ayuu yiri Xildhibaan Cabdi Cumar oo katirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Xagee ayuu ka jiraa cudurka baarlamaanka yaase mas’uul ka ah? Maxay u dambeyn doontaa shaqadii baarlamaanka? Su’aalahaas ayaa weydiinay C/llaahi Sheekh Xasan Wasiirkii hore ee dastuurka Koonfur Galbeed.
“Baarlamaanka in uu sidaan noqon doono hal sano ka hor waxaa sheegay Jawaari waxaana mas’uuliyadda qaadanaya Xukuumadda oo faragelin toos ah ku heyso” ayuu u sheegay Kalfadhi C/llaahi Sheekh Xasan.
“Guddoomiyaha baarlamaanka oo aan ku kalsoonahay waxaan qabaa in uu shaqadiisa wax ka badalo, sababtoo ah baarlamaanka isaga ayaa wax laga weydiinayaa Kheyrre iyo Farmaajo shaqo kuma lahan” ayuu yiri Wasiirkii hore ee dastuurka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Ugu dambeyntii C/llaahi Sheekh Xasan ayaa sheegay in baarlamaanka Soomaaliya ay u dhimantahay ugu yaraan 4 Kalfadhi hadana Kalfadhigii 5aad uu u muuqdo mid ku dhamaanaya buuq iyo Kalsooni la’aan waxa uuna ku taliyay in Xukuumadda iyo Golaha Shacabka ay dib isugu laabtaan.
“Aniga oo ka fekeraya danta guud waxaan ku talinayaa in waqtiga yar ee harsan laga faa’ideesto waxaa horyaala baarlamaanka shaqa badan” ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay Wasiirkii hore ee dastuurka KG Soomaaliya C/llaahi Sheekh Xasan oo la hadlay Kalfadhi.
Qal qalka ka jira fadhiyada Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay jirto loolan adag oo dhanka awoodda oo u dhaxeeeya Xildhibaano taageersan Xukuumadda kuwaas oo la aaminsan yahay in ay gadaal ka soo riixeyso Xukuumadda Raysal Wasaare Xasan Cali Kheyrre iyo Xildhibaano mucaarad ah kuwaas oo katirsan ama ka diiwaan gashan Xisbiyo mucaarad ku ah Xukuumadda Soomaaliya iyo kuwa dan gaar ah ka waayay Xukuumadda Kheyrre sida ay qabaan dad badan.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa furitaanka Kalfadhiga 5aad ee Golaha Shacabka ka sheegay in fadhigaan uu yahay kan ugu shaqada badan baarlamaanka, waxyaabaha horyaala uu ka tilmaamay dib u Eegista dastuurka, diyaar garowga doorashada iyo sharciyada Xisbiyada waxaana muuqata in shaqadaas oo dhan ay ku jirto cabsi sidii ay ku qabsoomi laheyd.